Ogaden News Agency (ONA) – Mudaharaad Balaadhan oo Addis Ababa Duleedkeeda Kadhacay & Warqado Badan oo Wadooyinka Lagu Daadiyay.
Mudaharaad Balaadhan oo Addis Ababa Duleedkeeda Kadhacay & Warqado Badan oo Wadooyinka Lagu Daadiyay.
Posted by ONA Admin	/ November 26, 2015
Waxaa mudaaharaad balaadhan iskugu soo baxay kumaan kum shacab ah oo gadoodsan tuulada Mendi oo kutaala duleedka magaalada Addis Ababa. Shacabkan ayaa waxay kacabanayaan dhibaatooyinkan kala duwan ee taliska Gumaysigu uu ku hayo Qawmiyada Oromiya.
Warkan ay ONA heshay ayaa intaas kudaraya in banaanbaxan uu aad uga duwanaa kuwii hore sababtoo ah shacabka ayaa si kalsooni iyo geesinimo leh cagta u mariyeen gabi ahaanba ciidanka nabad sugida Gumaysigu oo isku dayay ineey hor istaagaan shacabkan banaanbaxa iskugu soo baxay. Ciidanka Gumaysiga ayaa rasaas ku furay shacabkii mudaaharaadayay halsoo ay labo qof ku dhaawacmeen. Waxay mudaharaadayaashu ku dhawaaqayeen hal ku dhagayo ay ka mid ahaayeen waa nala layn karaa !! Waa nala dhaawci karaa !!! laakiin maraba nalagama gulaysan karo!!!
Waxaa kaloo warkani uu intaas raacinayaa ineey dadkan mudaaharaadayay ay taayiro iyo waxyaabo kale dab qabadsiiyeen taasoo muujinaysa heerka uu dareenka shacabku gaadhay. Waxaa kaloo ay wateen boodhadh ay ku qorraayeen hal kudhagyo kadhan ah taliska Gumaysiga Itoobiya.
Dhinaca kale waxay sheegayaan warar aan kahellay Kililka Shucuubta Koonfureed ee Itoobiya in labo magaalo oo kamid ah deegaankaas kuwaasoo kala ah Arbaamiji & Qujaana Goofa ay shalay subixii shacabku ku waabariistay waraaqo iyo sawiro badan oo wadooyinka iyo xaafadaha hortooda lagu daadiyay. Waraaqahan oon lagaranaynin cida ka dambaysay ayaa waxaa ku qoraa taageerada uu shacabku u hayo jabhada hubaysa ee Gimbot 7 Arbanjooj.
Waxaa kaloo kamid ahaa sawirada laqaybiyay qaar muujinaya madaxda Jabhada hubaysan oo kasoo hor jeeda Gumaysiga. Ciidanka Woyaanaha ayaa dhalinyaro badan jeelka u taxaabay kuwaasoo lagu tuhmayo ineey iyagu ka dambeeyeen waraaqahan wadooyinka lagu daadiyay.
Waxaa laga cabsi qabaa ineey xiisad aan lasaadaalin karin waxay ku dambayn doonto ay deegaankaas ka dhacdo. Shacabka Itoobiya ayaa muujiyay geesinimo & kalsooni buuxda oo loohayo Jabhadaha Gobanimadoonka ah ee Wayaanaha ladagaalamaya sida Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadenya. Meelo kala duwan oo dalka kamid ah ayaa laga soo sheegayaa kacdoono ka dhan ah Gumaysiga Itoobiya.